Fikarohana momba ny firaisana Fiainana teo aloha tany Whitney Houston sy Bobby Brown: Fampandrenesana Vaudeville Aida Overton Walker sy George Walker Reunited amin'ny alàlan'ny Reincarnation - Fikarohana Reincarnation
Mpankafy ny ReincarnationResearch.com no nanoratra ahy ary nanolotra izany Whitney Houston nanana fiainana taloha ho mpahazo ny Vaudeville Aida Overton Walker, mifototra amin'ny manaitra iray fitoviana ara-batana sy talenta mitovy amin'ny mpihira efa vita.
Ao anatin'ny fotoam-pianarana miaraka amin'ny mpamantatra trance malaza eran-tany Kevin Ryerson, izay mitondra fanahy antsoina hoe Ahtun Re, izay nampiseho ny fahaizana mametraka ny lalao taloha taloha miaraka amin'ny mari-pahaizana avo lenta, dia nanamafy i Ahtun Re fa i Whitney Houston, izay maty tao 2012, dia reincarnation Aida Overton.
Tamin'ny famakiana an'i Aida no nahalalako fa i Overton no anarany ary nanambady mpialokaloka hafa antsoina hoe George Walker izy. Rehefa avy nanambady izy dia naka ny anarana hoe Aida Overton Walker.
Ny fikarohana reincarnation dia manambara fa ny fanahy dia mirona miaraka amin'ny olona tsy fantatra taloha, ary io no fototry ny teny hoe "vondrona fanahy."
Fikarohana matanjaka nataon'i Ian Stevenson, MD tao amin'ny University of Virginia nasehony an-tsehatra izany fitsipika izany.
Stevenson ny Ny twin Study dia nahitana andianà kambana 31 izay nanana fahatsiarovana taloha niainana tamin'ny fahazazana izay voamarina tamim-pahamarinana. Ao amin'ny 100 isan-jaton'ireo tranga ireo, ny zaza kambana dia nanana fifandraisana lehibe tamin'ny fiainany taloha, anisan'izany ny fahitana fa ny mpivady dia afaka mahazo aina indray mba ho lasa mpivady indray.
Noho izany, tsy mitombina ny hanontany tena raha nanambady an'i Aida Overton, George Walker, ny vadin'i Whitney, i Bobby Brown. Tamin'ny fotoam-pianarako niaraka tamin'i Kevin, i Ahtun Re dia nanamafy fa i Bobby Brown dia reincarnation George Walker.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitoviana tsy misy dikany amin'ny endri-pitondrana Aida Overton Walker sy Whitney Houston. Misy endrika mitovitovy amin'ny endrika endrik'i George Walker sy Bobby Brown ihany koa.
Ny filan'ny fiainana taloha, ny talenta ary fahaiza-manao: I Aida Overton Walker sy George Walker dia kintana tamin'ny tontolon'ny fialamboly tao Vaudeville, toa an'i Whitney Houston sy Bobby Brown dia kintana fialamboly tamin'ny fotoanan'ny ankehitriny.